Saturday 1st August 2020 14:28:55 in Wararkii Maanta by Xafiiska Hargeysa
Dadka dibadbaxyada sameynaya, oo aan ka cabsaneynin cudurka safmarka ah ee coronavirus, ayaa ol'olahooda ka wada guud ahaan waddanka Mali, iyagoo dalbanaya inuu xilka iska casilo madaxweyne Ibrahim Boubacar Keïta.
Imaamkan wuxuu wax kusoo bartay dalka Sacuudiga
Wuxuu door muhiim ah ka ciyaarayaa caqabadda uu markan ka gudbi la'yahay madaxweynaha Mali ee ay mucaaradkiisa u maaro waayeen.
Waddanka Mali ayaa wajahaya dhibaatooyin aad u waaweyn, iyadoo xitaa ay ka howl galaan ku dhawaad 15,000 oo ciidamo shisheeye ah. Waxaa sidoo kale la geeyaa gargaar bani'aadannimo oo aan wali laga dhargin.
Ciidammada Faransiiska ee ku sugan Mali
Bishii April ee sanadkii 2019-kii, wuxuu abaabulay mudaharaadyo khasab ka dhigay in shaqada laga eryo Ra'iisul Wasaarihii xilligaas, Soumeylou Boubeye Maïga.
Xigashada Sawirka, MICHELE CATTANI
Madaxweyne Keïta wuxuu ku guuleystay doorashadii dhacday 2018-kii
Keïta wuxuu ku ol'oleynayay inuu dalka ka bixin doono xasarado culus oo jiray labadii sano ee xilligaas ka horreysay.
Laakiin maanta, madaxweynuhu wuxuu dareemayaa cadaadis xoog badan iyo go'doon siyaasadeed, halka Mr Cissé ay afduub ahaan u heystaan kooxaha mintidiinta ah ee jihaad doonka ah, kuwaasoo gacanta ku dhigay xilli uu bishii March ol'ole doorashada baarlamaaniga ah ka waday deegaan miyi ah.